MAKA Eurofighter Typhoon AlphaSim FSX & P3D - Rikoooo
downloads 50 486
MARA: FS2004 HUD na RADAR ekwekọghị na FSX anaghị etinye. Ntọala nke panel.cfg ka nọ ebe ahụ ka enwere ike ịdebe ihe ọzọ.
The Eurofighter Typhoon bụ a ejima-engine, canard-Delta nku, multirole fighter.   The Typhoon e mere site a Constrium nke usu atọ, EADS, Alenia Aeronautica na Bae Systems, na-arụ ọrụ site a na-ejide ụlọ ọrụ, Eurofighter GmbH , bụ nke e guzobere 1986. The oru ngo na-usoro ndị NATO Eurofighter na tonado Management Agency, a eme ihe dị ka onye bụ isi na ahịa.  Eurofighter Typhoon a na-emepụta serially site EADS, Alenia Aeronautica, na Bae Systems Constrium. The ugbo elu a na-procured n'okpuru iche iche contracts, aha ya bụ tranches, onye ọ bụla maka ugbo elu na-adịkarị mma ike. The Typhoon banyere ọrụ na Austrian Air Force, ndị Italian Air Force, ndị German Air Force, ndị British Royal Air Force, ndị Spanish Air Force, na Royal Saudi Air Force. (Wikipedia)
Speedbrake - eji / igodo, ma ọ bụ pịa panel button.
Chdọrọ Chute - na-eji njirimara 'reverse setrust' nke FSX/P3D, yabụ pịa ma jide igodo F2, mkpịsị ugodi F1.
Flaps - ata Typhoon nwere ya flaps achịkwa kọmputa otú e nwere ndị mba flaps levers ma ọ bụ gauges na panel. The AlphaSim nlereanya na-egosipụta nke a, ma ndị flaps nwere ike jiri-emebu keypresses. E nwere nanị atọ flaps ọnọdụ - n'ụzọ zuru ezu ruo ufọt ufọt ụzọ na ruo ala.
Pilot Visors - ala-akpaghị aka na ìhè
Gbanye mmanu nyocha - a na-eji 2nd Wepụ iwu. Jiri ihe ndị a keypresses (ma ọ bụ tọgharịa ihe ọzọ (na-atụ aro) na keyboard ọrụ) -
Pịa ma jide Mgbanwe isi, enweta E igodo otu ugboro
Hapụ Mgbanwe isi (mkpa) enweta na 2 isi ozugbo (n'ime 2 sekọnd nke na ịpị E isi).
Ntugharị VC - ntụgharị niile dị na vc bụ mousable na ọtụtụ ikpe na-eburu nkọwa ederede dị na Typhoon. Ntụgharị ndị a anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ maka na ọ rụpụtara naanị ya. Swfọdụ switches VC nwere FSX ọrụ, ndị a bụ igwe gia na ọkụ ala na-agbanye na ngwaọrụ aka ekpe, yana ọkụ ọkụ ọkụ nav & panel, ịgbanye mmanụ ọkụ (nkwụsị engine) na 2 Starter na-agbanye na igwe nri n'akụkụ aka nri.
Shutdown iji VC switches - shutdown na-na-na ịpị Fuel Cutoff mgba ọkụ-nri-n'akụkụ console na VC, mgba ọkụ nwere a red nche nke nwere ka iweli mbụ. The mgba ọkụ ga eweghachiri ihe ON ọnọdụ ozugbo engine na-spooling ala, ma ọ bụghị Malitegharịa ekwentị na-agaghị ekwe omume.
Malite site na iji VC switches - The ọrụ nwere ike na-amalite ma site na ịpị AutoStart button na ekpe elu panel, ma ọ bụ abụọ Starter switches nwere ike ji mee n'aka-nri-n'akụkụ console na VC. Ọ dị mkpa iburu n'obi na, a) mmanụ shutoff ga-anọ ON ọnọdụ dị ka akọwara n'elu, na b) na Starter switches n'ụzọ dị irè 'mmiri-kwajuru', onye ọrụ nwere na pịa ma jide òké na ha ruo mgbe engine catches , nke a na-ejikarị na-ewe ihe 6 sekọnd nke na-aga n'ihu nketa, na 'aka' pointer ga-agbanwe ka a 'aka' ozo ahu mgba ọkụ a na-e. Ọ bụrụ na ị hapụ mgba ọkụ n'ihu 6 sekọnd bụ elu, ị ga-begine usoro ọzọ. IHE: The Starter switches ga-amalite na engines ma ọ bụrụ na ctrl-nnofega-F1 keypress e ji mechie tupu oge eruo. The engines ga-mechie na iji red shutdown buttons na trotul console ma ọ bụrụ na VC Starter buttons bụ na-eji. Ọ bụrụ na ị na-eji ctrl-nnofega-F1, mgbe ahụ, ctrl-E ga-mkpa na-amalite ọzọ.
N'azụ kokpiiti - ị nwere ike gbaa ịnyịnya ahụ n'azụ nke VC site na ịpị na na-ejide Ctrl-Tinye ruo mgbe ije akwụsị. Mgbe ahụ pịa nnofega-Tinye ịkpọlite ​​ndị ele ihe anya dị ka a ga-nọ ọdụ oke ala. Laghachi ma reselecting ndị Typhoon ma ọ bụ na ịpị ctrl-backspace ịkwaga n'ihu ọzọ, mgbe ahụ ịgbanwee-backspace laghachi n'ebe ahụ ruo na ezi elu.
Smokesystem: e nwere button maka toggling na-acha ọcha ikuku ngosi anwụrụ ọkụ on / anya na n'elu aka ekpe buttons otu.
Ai Aircraft Labels: e nwere button maka toggling na Ai ugbo elu kpọọ on / anya na n'elu aka ekpe buttons otu. Nke a bụ na ndabara ma ọ bụrụ na ị nwere ya setịpụrụ na gị ngosi nhọrọ, n'ihi ya, ọ ga-egosi red ederede na bọtịnụ.
Ọtụtụ: a ala-poli elu fps nlereanya a gụnyere dị ka otu nhọrọ ka ofufe dị ka * player ugbo elu * na ọtụtụ sessions. Ọ bụghị onye na Ai nlereanya dị ka ndị dị otú ahụ.
Saab J-21 Fighter nke Sweden FSX SP2